Markii shaybaar qofka laga qaado - 1177
När man lämnar prov - somaliska
Markii shaybaar qofka laga qaado
När man lämnar prov - somaliskaThe content concerns Västerbotten
Shaybaarada qaarkood waxaa lagu keydiyaa keydka nooleha
Waxaa jirto xaalado ee bukaan-socodka laga qaado shaybaar, sida shaybaarka dhiigga ama shaybaarka unugyada. Shaybaarada waxaa kalo layska qaada markii caafimaadyada la baarayo sida kuwa Maamulka gobolka ee caafimaadka laga helo, sida tusaale baaritaanka dumarka ku salaysan shaybaarka unugyada. Marmar waxaa dhici karto in kaddib markii shaybaarada la baaray, lagu keydiyo keydka nooleha ee loo yaqaanno keydka nooleha.
Sababta shaybaarada loo keydiyo waxay noqon kartaa in bukaan-socod u helo daryeel iyo daawayn ka sii sugan kuwii hore. Qofka cudurka baaraayo waxaa laga yaaba in uu baahdo in uu is garab dhigo shaybaarada keysasdan iyo kuwa cusub. Keydka nooleha waxaa kaloo loo baahan yahay tababarka shaqaalaha daryeel-caafimaadeedka, hawlaha tayada, horumarinta iyo cilmibaaris awgood.
Warbixin-shaqsiyeedka iyo shaybaarada way sugan yihiin
Shaybaarada keydsan waxaa loo keydsha hab qof aan shaqo ku lahayn u gacan ugu dhigi karin. Warbixin-shaqsiyeedka shaybaarada waxaa lagu qora xasuus-qorka bukaan-socodka iyo diiwan shaybaarada gaar u ah. Dhamaan warbixin-shaqsiyeedyada waxay ku sugan yihiin Xeerka xajinta sirta xirfada iyo Sharciga bukaan-socodka ku salaysan farsamada kombyuutarrada.
Qofku isagaa dooran kara
Sida hadba ku xusan Xeerka keydinta nooleha waa in bukaan-socodka laga qaadayo shay-baarka la waydiiyaa haddii u raali ka yahay keydinta shaybaarkiisa. Shaqaalaha daryeel-caafimaadeedka waxaa waajib ku ah in bukaan-socodka ay wargeliyaan sida shaybaarka loo adeegsan doono. Teeda kale, waa in bukaan-socodka la wargeliyaa in uu awoodo ka talinta keydinta shaybaarka iyo sida loo adeegsan doono.